Ma isla caqabadaan ayaaa addigana kaa hortaagan inaad ku dhaqaaqdo hadafkaaga?
Fikrado, falanqayn iyo qoraallo shaqsi ahaaneed
Bishii koowaad ee sannadka 2021 ayaa dabayaaqo ah maanta, berri waxaa billaabanayso bil cusub. Hadaba waxaa is waydiin mudan, ma ku dhaqaaqday samaynta kuwa ka mid ha yoolalka (goals) aad sannadkaan rabtay inaad ka dhabayso?
Haday jawabtaadu (Haa) tahay hoos igula wadaag qaabka ama xeelada aad u is ticmaashay inaad ku dhaqaaqdo ka dhabaynta yoolkaaga. Haday se jawaabtaadu (Maya) tahay isoo raac si aan kugula wadaago qodob caan ah isla markaana daahsoon oo ah darbiga ku aadan ku dhaqaaqida iyo ka run sheegista yoolalka.
Waxaan anigu sannado badan degsaday qorshooyin ku aaddan hadafyadayda hadana saas ay tahay waxaa inta badan dhacda in sanndka ama bishu markay dhamaato aanan ku guulaysan inaan ka run sheego hadafyadayda. Hadaba anigoo guul darradayda sannad laha’ah la fajacsan ayaan akhristay maqaal (Article) qamiisle ah uu qoray Qoraa la yiraahdo James Clear. Halkaa oo uu James ku leeyahay sababta ugu wayn ee kaa hortaagan inaad ku dhaqaaqdo ka run sheegista yoolalkaaga waa ku dhaqaaqid la'aan taas oo ku qarsan hab fikirka ah “ Waxaan u baahanahay inaan wax badan sii barto”oo ku aaddan yoolalkayga inta aanan ku dhaqaaqin ka hor. Hadaba waxa uu halkaan qoraagu kala jeedaa oraahdaan waa in ay dhacdo in badan in ku dhaqaaqii ficilka inaga hortaagan yahay fikirka ah in aan u baahanahay in aan wax badan sii barano ama ka ogaano waxa aan rabno inaan samayno. Hadaan tusaale aniga isku soo qaato, waxaan in mudo 2 sano ah ku tamaninayay inaan maqaallo qoro kadibna dadka la wadaago kuwaas oon fikir kayga ku aadan mawdduucyo kala duwan ku cabirayo. Hadaba maxay iigu suurto gali wayday mudadaas dheer oo dhan ayaa laga yaabaa inaad is waydiinayso?
Sababkale maahayn ee waxaan aaminsanaa inaan u bahaanahy inaan wax badan sii barto, haday noqoto qaabka loo qurxiyo qorista soomaaliga, astaammaha maqallada lagu dhex xuso, halka aan kula wadaagi lahaa dadka iyo waliba wakhtiga aan qori lahaa maqaallada. Miyaan bartay marka qodobadaan oo dhan 2-dii sano oo tagtay? Arrinta qosalka leh ayaa ah in aanan muddadii 2-bada sano ahayd een fikirkaas xambaarsanaay aanan baran habayaraatee mid ka mid ah qodobada aan is lahaa wax badan ka sii baro. Halka ay xaqiiqdu tahay in qodobaddaas oo dhan ay ahaayeen nuucyo cudurdaarada ka mid ah oo ku salaysan hab fikirkii Qoraagu lahaa “Waxaan u baahanay inaan wali wax badan sii barto” halka fariinta oraahda ay tahay in habka ugu wanaagsan ee wax lagu barto ay tahay in ficil ama samayn lala yimaado.Waayo markaad samayso ood hadana ku celceliso ficilka aad baad u baranaysaa malinba malinta ka danbaysa. Halka hadaadan farba u qaadin oo aadan samayn, aadan waligaa baranayn.
Hab fikirkaas asaga ah si aan iskaga badelo ayaan anigu go’aan saday in sannadkaan fikirada maankayga buuxiyay aan qoraal ahaan ku cabiro si aan “ficil samayn” ula imaado maadaama hawl qabashada iyo samaynta ay barashadu ku dhex jirto, isla markaana aan ka tanaasulo hab fikirka ah wax baa kuu sii haray ee siibaro wali. Hadaba waxan rajayna inaad adiguna u fiirsato hab fikirkaaga si aad u aqoonsatid caqabada ugu wayn ee kaa hortaagan inaad ku dhaqaaqdo am qabato waxa aad ku tamaninayso sanadkaan 2021.
Waxaan qoraalkayga kusoo afmeeerayaa oraahdii uu lahaa qoraaga caanka ah ee John C.Maxweell oo oranayday “ Riyooyinku ma shaqeeyaan ilaa inaad samayso mooyee” waxaa intaas ku darayaa ogoow in wax qabad yar uu kun jeer ka wanaagsan yahay wax qabad la’aan sanadka dhamaadkiisa.
Su’aal: Caqabadee ayaad berri diyaar u tahay inaad iska horwareejiso si aad 11-ka bilood ee ka harsan sannadkan Eebe haduu idmo aad uga faa'daysato sidaad u qorshaysatay?
Maxaa ka mid ahaay hadafyadaadii sannadkan 2021-da? Imisa ka mid ah ayaad ku dhaqaaqday?
Gorfeynta Buugga ”No time for goodbye” (Majiro wakhti laysku macsalaameeyo)
Halkaan iigu reeb qoraal, aad igu lawadaagayso aragtidaada.